🥇 ▷ Siri: Apple waxay u oggolaataa shaqaalaha inay dhegeystaan ​​sheekooyinkaaga, sida Amazon iyo Google ✅
Siri: Apple waxay u oggolaataa shaqaalaha inay dhegeystaan ​​sheekooyinkaaga, sida Amazon iyo Google
Apple waxay u oggolaaneysaa shaqaalaha inay dhagaystaan ​​wadahadallada khaaska ah ee ay duubtay Siri, waxay shaaca ka qaadday inay si cad u muuqato. Sida Amazon iyo Google, shirkadda Cupertino waxay runtii weydiisataa bini-aadamka inay falanqeeyaan qaar ka mid ah feylasha maqalka ah ee lagu duubay iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook ama HomePod, oo aan la aqoon dadka isticmaala.
Apple waxay weydiisaneysaa qandaraasleyaasha inay dhagaystaan ​​oo ay falanqeeyaan qaar ka mid ah wadahadalladii ay duubay Siri, u soo sheeg asxaabteena ku sugan Guardian. Saxaafaddu waxay ka haysaa macluumaadkeeda si qarsoodi ah oo qarsoodi ah. Ninku wuxuu sheeganayaa inuu ka mid yahay shaqaalaha xisbiga saddexaad oo dhagaysta cajaladaha Siri. Sida laga soo xigtay isaga, shaqaalaha qandaraaska ee Apple Xusuusnow jawaabaha kaaliyaha codka oo ku saleysan arrimo kala duwan. Gaar ahaan, waxay leeyihiin hawsha go’aaminta in firfircoonaanta amarrada “Dis Siri” ay tahay mid iskaa ah ama shil ah.
Sidoo kale aqri: Siri iyo Kaaliyaha Google waa caawiyayaasha caqliga badan ee loo adeegsado adduunka, hortooda Alexa
Siri: Apple waxay u oggolaaneysaa dhinacyada saddexaad inay soo basaasaan wadahadalladaada gaarka ah
Mararka qaarkood dadka masuulka ka ah dhageysiga ayaa ku dhaca cajalado maqal ah oo gaar loo leeyahay. “Waxaa jiray kiisas badan oo diiwaangelin ah oo ku lug leh wadahadal gaar ah oo dhex maray dhakhaatiirta iyo bukaannada, heshiisyada ganacsiga, sida muuqata xiriirka dembiyada, xiriirka galmada,” ayuu yiri af-hayeenku. Sida laga soo xigtay isaga, duubitaan kasta waxaa la socda macluumaad ay ka mid yihiin “juquraafi iyo isku-duwe” aaladda. Inta badan, waa Apple Watch ama HomePods kuwaas oo si kadis ah u shaqeynaya, maraggu wuxuu leeyahay. “Waxaad maqlaysaa, tusaale ahaan, dadka ku hawlan ficillo galmo oo si kama ‘ah loogu duubay Watch,” ayuu yidhi. Waqtigu wuxuu awoodaa inuu duubo cajalado maqal ah oo ah 30 ilbiriqsi.
Apple si dhakhso leh ayuu u isticmaalay xuquuqdiisa jawaabta ee The Guardian. Shirkadda ayaa leh arrintaas kaliya 1% ee maqalka codka Siri waxaa dhageysanaya aadanaha. Sidoo kale, shirkadda ayaa ku qiyaaseysa inaysan suurtagal ahayn in la go’aamiyo aqoonsiga dadka laga maqlay faylalka la falanqeeyay. Qayb yar oo ka mid ah weydiimaha ayaa la falanqeeyay si loo wanaajiyo Siri iyo erey-bixinta codsi. Codsiyada isticmaaleyaasha lama xiriiraan gelitaanka Apple. Jawaabaha Siri waxaa lagu falanqeeyey xarumaha amniga oo dhammaan dib-u-fiirinta waxaa looga baahan yahay inay la kulmaan shuruudahayaga adag ee sirta. “Apple ee the Guardian .
Sidee looga hortagaa inuu Siri ku basaaso?
Si looga hor tago Siri inuu dhagaysto oo duubto sheekaysigaaga khaaska ah adiga oo aan aqoon u lahayn, si fudud u dami ikhtiyaarka “Dis Siri” ee ku yaal iPhonekaaga ama iPad-kaaga. Isla xididada, waxaad sidoo kale ka hortegi kartaa Siri inay ku dhageysato adiga oo adeegsanaya Apple Watch isla marka aad gacanta kor u qaaddo.
Disable “Dis Siri” on iPhone iyo iPad
Waxaan kugu aragnaa dejinta aad iPhone / iPadGo to Siri iyo cilmi baarisCalaamadda sanduuqa “Dis Siri”
Disable “Wrist Mount” ee Apple Watch
Balanta arjiga La soco ka aad iPhoneGo galay Guud markaa Shaashadda muujiSanduuqa ka fur sanduuqa kor u qaadidda curcurka
Waqtiyadan ka dib, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad curyaamiso ikhtiyaarka “Qeexid” qeybta guud ee arjiga daawashada. Xusuusin ahaan, Apple ma aha shirkadda keliya ee sidan u yeelata si loo hagaajiyo waxqabadka kaaliyaha codkiisa. Bishii Abriil ee la soo dhaafay, Amazon waxay qirtay in shaqaaluhu dhageystaan ​​wadahadallada ay duubtay Alexa, oo ah kaaliyaha caqliga leh ee ku hadla Echo. Waa isku mid Google Home.
Xigasho: The Guardian